Ọdọ gbapụrụ | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Slovenia, Ihe ị ga-ahụ
Slovenia Ọ bụ mba ji nwayọ na-enweta ala n’etiti ebe ndị njem nleta na Europe. Mara mma! N'etiti obodo ochie ya na oke ala ya, eziokwu bụ na ọ naghị akwụsị ị nweta ndị nwere mmasị. Otu n'ime ya nkume pel bụ, ọmụmaatụ, na Ọbara gbara ọbara.
Foto ọ bụla nke ọdọ mmiri dị ka akwụkwọ ozi, yabụ ọ bụrụ na Slovenia so na ebe ị na-aga eleta, echefula ilegharị anya na ọmarịcha njem a. ọdọ mmiri alpine. O yiri ka n'oge ọ bụla, akụkọ ifo ga-esi na mmiri ya pụta.
1 Ọdọ agba ọbara
2 Gaa Leta Ọdọ gbara
Ọ bụ a ọdọ na-emi odude ke na-akpọ Julian Alps, n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ Slovenia. Nke a dị kilomita 55 site n’isi obodo Ljuljana, ya mere ọ ga-abụ ajọ ihe ịga ma tufuo ya n'ihi na ịdị anya abụghị ihe ọ bụla.
Ọdọ bụ ọdọ nwere akụkụ tectonic, nwere akụkụ nke glacial. Ihe niile oke ohia na ugwu di ya gburugburu na obodo, Bled, nke mgbe ochie. Igwe mmiri ahụ nwere obosara nke mita 1380, mita 2.210 n'ogologo na ịdị omimi nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita iri atọ.
Ọdọ ahụ nwere agwaetiti, ndị agwaetiti gbara ọchịchịrị, Blejski otok na Slovenian, tinyere ọtụtụ ụlọ okpukpe raara nye Virgin Mary. Oge kachasị na njedebe nke narị afọ nke XNUMX na nke ochie ka nwere frescoes ndị Gothic sitere na narị afọ nke XNUMX. Enwekwara ụfọdụ ụdị ụdị Baroque.
Ochie ochie ka nwere 52 elu ụlọ elu nke a pụrụ ịhụ site n'ikperé mmiri nke ọdọ, na n'ime ya baroque steepụ a kpụrụ na 99 nkume nzọụkwụ malite na 1655.
Ihe dị mma bụ na a ka na-eji chọọchị ahụ agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ya mere were ihe ichoro di na nwunye ebe a ... ebube! Ọdịnala na-egosi na nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ ga-ebu nwanyị ahụ ọ na-alụ ọhụrụ banye n'ụlọ nsọ, kpọọ mgbịrịgba ahụ ma mee uche ya. Na ihe niile na-ezo aka na otu akụkọ mgbe ochie...
Otu akụkọ mgbe ochie na-ekwu na ọ dị mgbe otu nwatakiri nwanyị di ya nwụrụ bi na Bled Castle Di ya anwụchirila di ya ma tụba ozu ya n’ime mmiri. Ọnwụ ya bibiri ya ma gbazee ọlaọcha ya na ọla edo ya niile iji mee mgbịrịgba maka ụka nke agwaetiti ahụ iji cheta ịhụnanya ya. Nke bụ eziokwu bụ na mgbịrịgba ahụ abịaghị n'ihi na ụgbọ mmiri bu ya bu nke ụgbọ mmiri kpuru.
Ọbụna nke kacha nwee nkụda mmụọ, nwanyị di ya nwụrụ rere ihe niile o nwere iji wuo ụka ọhụrụ n'àgwàetiti ahụ, hapụ ụlọ ahụ ma kwaga Rome ịghọ onye nọn. Mgbe ọ nwụrụ, Popu ahụ nọ n’ọrụ nụrụ akụkọ mwute ya na n’ikpeazụ kpebiri ime mgbịrịgba, na-ekwukwa na onye ọbụla kụrụ mgbịrịgba ahụ ugboro atọ ma kwere na Chineke ga-ahụ ka e mezuru ọchịchọ ya. N'ihi ya ọdịnala ndị nwunye na nwunye.
Gaa Leta Ọdọ gbara
Enwere kilomita isii n'okporo ụzọ gbara ọdọ mmiri gburugburu ma enwere ike ime nwayọ na ụkwụ ma ọ bụ site n'ịnyịnya igwe na ije dị ụtọ. Mgbe ị na-eje ije ị nwere nnukwu echiche nke ọdọ, oke ọhịa, nnukwu ụlọ na ugwu nta. Enwekwara oche ndị ọzọ izu ike ntakịrị dị na ebe ndị dị mma na-enye gị ohere ịnụ ụtọ echiche: agwaetiti, ugwu, ọdọ ọdọ ...
Site n'ụsọ oké osimiri n'onwe ya ị nwere ike ịkwụ ụgwọ a ịnyịnya na-adọrọ ụgbọ ịnyịnya ma nke ahụ na-aga n'okporo ụzọ. A na-akpọ ndị nkụzi ndozi. E nwekwara ọdịnala osisi ụgbọ mmiri, ndị efere, nke na-akpọrọ gị n'àgwàetiti ahụ site n'ụsọ oké osimiri. Ha na-arụ ọrụ site n'ụgbọ mmiri akpọ pletnar ma n’ọkọchị ha na-abịa ma na-aga oge niile.
Uzo ozo di nma iji nwee obi uto bu nke ya Ledlọ nnukwu ọbara O yiri ka ọ kwụgidere n’elu ugwu. Ọ bụ nnọọ ọmarịcha, ụbọchị si XII narị afọ ọ nwere ụlọ ihe ngosi nka mara mma nke nwere win win na-arụ ọrụ. Pụrụ ọbụna nụrụ ụtọ ha mmanya na nnukwu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na n'oge okpomọkụ ọnwa ma eleghị anya, i nwere ike izute onye-nwe nke ebe e wusiri ike ma ọ bụ na-ekiri na-agba ụta mgbe a na-agba ụta. Oge ochie.
O nwekwara a mara mma uka Gdị Gothic na patio. Ọ wuru na narị afọ nke XNUMX na nwere ụfọdụ mgbe e mesịrị Baroque mmezigharị. N’akụkụ ebe ịchụàjà ahụ, e sere ihe osise nke Emperor Emperor II nke Germany na nwunye ya Kunigunda na ọmarịcha ihe osise ụfọdụ. Offọdụ n'ime ime ụlọ nke nnukwu ụlọ a kwadebere ka a ga-egosipụta na-egosi akụkọ ihe mere eme nke ebe e wusiri ike na ya ụkpụrụ ụlọ mmepe ma ọ bụ ihe ndụ dị ka ya n'ime oge.
Eziokwu bụ na ị gaghị echefu nnukwu ụlọ ahụ n'ihi na ọ na-enye echiche kachasị mma nke Ọdọ Mmiri Bled na agwaetiti ya mara mma.
Yabụ, naanị otu ụzọ aga agwaetiti ahụ n'onwe ya bụ n'ụgbọ mmiri ndị ahụ mara mma. Ga-akwụ ụgwọ iji leta ya ma tiketi ahụ gụnyekwara ileta ụlọ elu mgbịrịgba na-enwe panoramic echiche ya awade. Okenye na-akwụ ụgwọ 6 euro, Ụmụ akwụkwọ 4, ụmụaka naanị 1 euro na ezinụlọ na-akwụ ụgwọ njikọta nke euro 12. Ndị a bụ ọnụahịa ziri ezi maka afọ 2018. visit gara na ebe nrụọrụ weebụ agwaetiti ahụ ma ị nwere ike ịzụta ha n'ebe ahụ.
Naanị ị ga-eburu n'uche na n'otu ibe a dọrọ gị aka ná ntị na n’afọ na-abịa ọrụ mmezi nke mgbịrịgba ụlọ elu ga-amalite Yabụ ma eleghị anya ọ ga-emechi emechi nwa oge. A ga-eweghachite nzọụkwụ nkume iji mee ka ọ dị nchebe ịrịgo, yana kwa elekere ochie.
Na weebụsaịtị ị chọpụtakwara nke ahụ gburugburu ọdọ ahụ nwere ụlọ nkwari akụ, dị mfe ma mara mma, nke ụdị B&B, Ọ na-efu site na euro 45 ruo 98 n'otu abalị. Ọ na-enye WiFi, ọ dị otu narị mita site na ọdọ, na-esote Chọọchị San Martín, 300 mita site na nnukwu ụlọ na agwaetiti ahụ dị otu kilomita, ọ nwere ụlọ mmanya, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ nwere TV na ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe. Kedu maka?
N'ikpeazụ, Emechara. Ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mma nke mba ahụ yana otu n'ime ihe kachasị mara amara n'ihi na enwere mmiri ọkụ na-ewu ewu kemgbe mmalite narị afọ gara aga. N'ezie, a na-ewere Bled na ọ bụ ezumike kacha mma na Austria na Hungary. Iji nọrọ ebe a na elu, ụlọ nkwari akụ akwadoro ma dị oke ọnụ bụ Vila Bled, ebe sitere na 50s.
Ma ugbu a ee, ke akpatre, adịghị anya site ọdọ bụ Vintgar Osimiri, mara mma, jiri àkwà mmiri osisi mee ka ị nwee ike ịga ogologo kilomita na ọkara ma nwee ekele maka nsụda mmiri ya na ọdọ mmiri ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Slovenia » Ọdọ agba ọbara